Maalin: Janaayo 1, 2018
4 milyan oo Izmiiliyiinte ah ayaa hurdada ka toosay maalinta ugu horreysa ee 2018. biyo la cabbo oo CHP Izmir ee degmada Metropolitan iyo gaadiidka dadweynaha si aad u hesho xnumx'luk boqolkiiba tug in dhaqan galay sida maanta magaalooyin badan iyo nawaaxigeeda ee dalka Turkiga [More ...]
Antalya si ay u markhaatifuraan maalgashiga weyn ee 2018
Antalya waxay goob joog u noqon doontaa dhammaystirka maalgashiga-tallaabada-tallaabada ah ee 2018. Magaalada Antalya, Duqa magaalada Menderes Türel wuxuu oran doonaa wuxuu imaan doonaa xarunta dalxiiska. Sugitaanka ugu xiisaha badan ee dadka Antalya [More ...]
Istanbul 3. Meteorological Tower waxaa lagu qaban doonaa garoonka diyaaradaha
markii ugu horeysay ee garoonka diyaaradaha ee Turkey "Saadaasha Hawada Tower" waxaa la sameeyaa. Markii la dhammeeyo Meteorological Tower, waxay noqon doontaa mid ka mid ah munaaradaha ugu casrisan adduunka. Meteorological Tower 3 oo dhowaan laga dhisay Istanbul. ka soo muuqday faahfaahinta garoonka diyaaradaha. Dhismaha Saadaasha Hawada [More ...]
Xirmooyinka Mootooyinka iyo Wadooyinka Gawaarida 1 Janawari 2018 Isniinta, 00: dib ayaa loo soo celiyay sida 00. Gelitaan kaas oo bixiya gaadiid dhaqaale, badbaado leh iyo gaadiid raaxo leh waqti yar [More ...]
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, yoolalka sanadka ee '2018', cagaar iyo muuqaal muuqaal ah, walaac bilic leh, qaab dhismeedyo caan ah oo matalaya magaalada ayaa soo ifbaxay oo ugu muhiimsanaa hagaajinta taraafikada. [More ...]
Zoo ee magaalada Berlin, Jarmalka, Saldhigga Tareenka ee qiiqa culus ee la arkay, tareenka ayaa la joojiyay. Barta Twitterka, Booliska Jarmalka ayaa ku soo waramay in qiiq culus lagu arkay Xarunta Tareenada Zoo ee Magaalada Berlin. [More ...]
Maanta taariikhda: 1 Janaayo 1937 Dalbashada Tareenada Tareenka Taariikhda
1 Janaayo 1920 Railway Battalion waxaa laga aasaasay Yaxyahan. Battalion waxaa loo diray Eskişehir iyo Afyon iyo daadgureynta Eskişehir iyada oo ciidankii laga saaray Sakarya intii lagu jiray dagaalladii Kütahya waxaa bixiyay mashiinka 20 iyo gaari xNUMX. Cunto kariye 500 [More ...]